निर्वाण चौधरीलाई ३ प्रश्नः नेटा भी किन चढ्ने ?
7:58 pm, बुधबार, जेठ २५, २०७९
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी मोटरले चिनियाँ ब्राण्ड होजोन मोटरको इलेक्ट्रीक क्रसओभर नेटा भी आजबाट आधिकारीक रुपमा विक्री सुरु गरेको छ । कम्पनीले सन् २०१४ मा स्थापना भएको र सन् २०१९ बाट गाडी उत्पादन थालेको थियो ।
चिनियाँ बजारमा गाडी विक्री गर्न थालेको तीन वर्षपनि नपुग्दै होजोन मोटर्सको उत्पादन नेपाल आएको हो । नेपाली बजारमा यो कारले कस्तो विक्री पाउँछ भन्ने विषयमा अहिल्यै एकिन गर्न सकिदैन । यद्यपि, यसमा धेरै मानिसको चासो भने रहेको देख्न सकिन्छ ।
सिजी मोटरका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीलाई मेरोअटोले विश्व बजारमा आएको ३ वर्ष मात्रै भएको नयाँ ब्राण्ड नेपाल ल्याउनुको कारण बारे पहिलो प्रश्न गरेको थियो ।
७ लाख ५० हजार डाउन पेमेन्ट गरेर ‘नेटा भी’ किन्न पाइने (मासिक किस्तासहित) यो पनि पढ्नुहोस्
प्रश्न १. नेपालमा इलेक्ट्रोनिक्स होम एप्लाइसेन्सको पायोनियर कम्पनीको नाताले मात्रै नयाँ ब्राण्डमा जोखिम मोल्नु भएको कि अन्य केही देखेर होजोनका उत्पादन नेपाल ल्याउनु भएको ?
कुनैपनि कम्पनी नयाँ काम पुरानै परम्परागत कम्पनीको तुलनामा नयाँ कम्पनीले राम्रो गर्ने हामीले देखेका छौं । अहिलेको अवस्थालाई अटोमोवाइलमा एउटा युगको अन्त्य हुनेतिर र अर्को युगको सुरुवाति चरणमा रहेको मान्न सकिन्छ । यस्तोमा परम्परागतभन्दा नयाँ कम्पनी प्रति विश्वास हुनु स्वाभाविक हो । विश्व जुन दिशामा जान्छ हामी त्यता नै जाने हो । १० वर्षअघि नै विद्युतीय गाडी ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसको लागि विद्युत चाहिन्थ्यो । अहिले नेपालमा विजुली पनि उपलब्ध रहेको र, विश्वमा टेस्ला जस्ता नयाँ ब्राण्डले विश्वास जित्दै गएको कारण हामीले होजोन ब्राण्ड नेपाल ल्याएका हौं ।
प्रश्न २. नेपालमा साना गाडीको बजार हरेक वर्ष घट्दो छ । अहिले बजारमा ४ मिटरभन्दा छोटा एसयूभी र ४.३ मिटर हाराहारीका कम्प्याक्ट एसयूभीको बजार सबैभन्दा ठूलो छ । तर, तपाईले ल्याउनु भएको नेटा भी क्रसओभर मोडल हो । कसरी ग्राहकलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा साना ह्याचव्याक कारको बजार घटेको हो । सबै ह्याचव्याक चढ्ने मानिससँग एसयूभीमा जान सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो गाडी साइजमा सब फोर मिटर एसयूभीभन्दा लामो छ । सँगसँगै फिचरमा पनि अहिले बजारमा उपलब्ध ३५/४० लाखका एसयूभीभन्दा उत्कृष्ट छ ।
अहिले बजारमा सबैभन्दा धेरै खोजिने गाडी नै क्रसओभर मोडल हो जस्तो लाग्छ । यो एउटा पूर्णत पारिवारीक कार हो । यसलाई हामीले ‘भ्यालू फर मनी’ कारको रुपमा बजारमा ल्याएका छौं । यसले ग्राहकको आवश्यकता त पुरा गर्छ नै आर्थिक रुपमा पनि राम्रो बचत गराउँछ ।
अन्तिम प्रश्नः गाडी ल्याउनु भयो भोलिबाट बजारमा गुड्न थाल्छ । एउटा सिटी कारको रुपमा प्रयोग हुने हुँदा ग्राहकले चार्जिङ घरमा नै गर्लान् । तर, कतै घुम्न जान मनलागेको खण्डमा के गर्ने ? अझ सहज तरिकाले भनौं चार्जिङ पूर्वाधिर विस्तारका योजना कस्ता छन् ?
तपाईले भनेजस्तै घरमा नै यसलाई चार्ज गर्ने हो । दोस्रो यसको रेन्ज ४ सय किलोमिटर हाराहारी छ । त्यसैले पोखरा, चितवन, बर्दिवास जस्ता सहरमा जान चार्जको समस्या हुँदैन । अर्को हामी डिलर नेटवर्क विस्तार गर्दैछौं । नेटवर्क विस्तारसँगै चार्जिङ स्टेशन पनि निर्माण हुन्छ । हामी फास्ट चार्जिङ नेटवर्क पनि विस्तार गर्छौ । यसलाई हाम्रो सुरुवात सम्झनुहोस् । चाँडै हामी थप मोडल र ब्राण्ड लिएर आउँछौं ।